बालुवाटारमा देउवासँग लामो भलाकुसारी : के थियो ओलीको प्रस्ताव ? - DURBAR TIMES
HomePoliticsबालुवाटारमा देउवासँग लामो भलाकुसारी : के थियो ओलीको प्रस्ताव ?
कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ओलीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै १९ पेजको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। प्रचण्डले उठान गरेका विषयलाई एकएक जबाफ दिदै काउन्टर प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा प्रधानमन्‍त्रीको टिम लागेको छ। मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीले प्रचण्डलाई लिखित जबाफ दिनेछन्।
Previous articleसहसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीले लोक सेवा पढाउन मन्त्रिपरिषदको अनुमति लिनुपर्ने, यसअघिका स्वीकृति खारेज
Next articleकक्षा १२ का परीक्षार्थीलाई शिक्षामन्त्रीको अनुरोध– सचेतना अपनाउँदै ढुक्क भएर परीक्षा दिनुस्